Ncheta nke usoro cybercourtoisie
Edere site Tranquillus | Jan 7, 2019 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Onye ọrụ French na-eji ihe dị ka elekere anọ nke izu na-elegharị ọtụtụ narị emel ọ na-eziga ma na-enweta kwa ụbọchị.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na anyị rapaara n’akpa ozi igbe anyị akụkụ dị mma nke oge anyị, ọtụtụ n’ime anyị, ọbụlagodi ndị ọkachamara kacha arụ ọrụ amaghị. ozi kwesiri ekwesi.
N'eziokwu, nyere ụda ozi anyị na-agụ na ide kwa ụbọchị, anyị nwere ike ime ihe na-eme ihere, nke nwere ike inwe nnukwu nsogbu ahịa.
N'isiokwu a, anyị akọwalarị iwu kachasị mkpa "cybercourt" ịmara.
Gụnye ihe doro anya na kpọmkwem nke ihe
Ihe atụ nke ezigbo isiokwu isiokwu gụnyere "Nzukọ Mgbanwe Mgbanwe", "Ajụjụ Dị Mkpa na N'ihu Gị", ma ọ bụ "Aro maka Ntube".
Ndị mmadụ na-ekpebikarị imepe a email Dabere n'ahịrị isiokwu ahụ, họrọ otu nke na-eme ka ndị na-agụ akwụkwọ mara na ị na-edozi nchegbu ha ma ọ bụ nsogbu azụmahịa.
Jiri adreesị ozi-e ọkachamara
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ, ị ga-eji adreesị ozi-e nke ụlọ ọrụ gị. Mana ọ bụrụ na ị na-eji akaụntụ email nkeonwe, ma ị bụ onye nweere onwe gị ma ọ bụ na ịchọrọ iji ya mee ihe maka oge azụmahịa, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-ahọrọ adreesị a.
Ị ga-enwe adreesị ozi-e na-ebu aha gị ka onye na-enweta ya mara kpọmkwem onye na-ezipụ ozi-e. Ejila adreesị ozi-e nke na-erughị ọrụ.
Chee echiche ugboro abụọ tupu ịpị "zaghachi niile"
Ọ dịghị onye chọrọ ịgụ ozi ịntanetị sitere na mmadụ 20 na-enweghị ihe ọ bụla gbasara ha. Ileghara ozi ịntanetị anya nwere ike isi ike, ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ na-enweta ọkwa nke ozi ọhụrụ na ekwentị ha ma ọ bụ na-adọpụ uche na mmapụta ozi na kọmputa ha. Gbochie ịpị “zaghachi ndị niile”, belụsọ na ị chere na ndị otu niile depụtara ndepụta ahụ kwesiri ịnabata email ahụ
Gụnye mbinye aka mbinye aka
Nye onye na-agụ gị ozi gbasara gị. Dị ka iwu n'ozuzu, gosi aha gị, aha, aha ụlọ ọrụ na ozi kọntaktị, gụnyere nọmba ekwentị. Ịnwekwara ike ịgbakwunye ụfọdụ mgbasa ozi, ma anaghị agabiga oke okwu ma ọ bụ ihe atụ.
Jiri otu ụdị, size, na agba dịka ndị ọzọ nke email.
Jiri ekele ndị ọrụ
Ejila okwu nlere anya dị ka "Ndewo", "Hi!" Ma ọ bụ, "Olee otu?"
Ụdị ezumike nke ihe odide anyị ekwesịghị imetụta ekele ahụ na email. "Hi!" Ọ bụ ozi ekele dị oke na n'ozuzu, ọ gaghị eji ya rụọ ọrụ. Jiri "Ndewo" ma ọ bụ "Ezi mgbede" kama.
Jiri isi ihe na-ekwu okwu na njedebe
Ọ bụrụ na ị họrọ iji okwu mkparị, jiri naanị gosi mmadụ ịnụ ọkụ n'obi gị.
Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ewe iwe ma tinye ọtụtụ akara akara na njedebe nke ahịrịokwu ha. Nsonaazụ nwere ike iyi ka ọ bụ mmetụta uche ma ọ bụ ọmụmụ akabeghị aka, a ghaghị iji okwu ndị na-akpali akpali mee ihe n'atụghị egwu ederede.
Kpachara anya na ọchị
Enwere ike ịdọrọ ihu ọchị na nsụgharị na-enweghị ụda ziri ezi ma ọ bụ ọdịdị ihu. Na mgbanwe ọkachamara, ọ ka mma ịhapụ ọchị site na ozi ịntanetị, ọ gwụla ma ị maara onye natara ya nke ọma. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ị na-eche na ọ bụ ihe ọchị nwere ike ọ gaghị abụ maka onye ọzọ.
Mara na ndị si n'ọdịbendị dị iche iche na-ekwu ma na-ede ihe dị iche iche
Mkparịta ụka na-adịghị mma nwere ike ịme ngwa ngwa n'ihi ọdịiche ọdịbendị, karịsịa na ederede ederede mgbe anyị na-enweghị ike ịhụ asụsụ ahụ nke onye ọzọ. Debe ozi gị na omenala nke onye natara ma ọ bụ ogo mmụta gị.
GỤỌ Email template igosipụta nkwenye
Ọ dị mma iburu n'uche na omenala dị ukwuu (asụsụ Japanese, Arabic ma ọ bụ Chinese) chọrọ ịmata gị tupu gị na gị azụ ahịa. N'ihi ya, ọ ga-abụkarị ndị ọrụ nọ na mba ndị a ka ha nwekwuo ihe ha dere. N'aka nke ọzọ, ndị mmadụ si n'ọnọdụ dị ala (German, American or Scandinavian) na-ahọrọ ịga ngwa ngwa ruo n'ókè.
Zaa ozi ịntanetị gị, ọ bụrụgodị na email ahụ abụghị maka gị
O siri ike ịza ozi-e niile ezitere gị, mana ị ga-anwale. Nke a gụnyere ikpe ebe e zigara gị ozi email, karịsịa ma ọ bụrụ na onye na-ezipụ na-echere azịza. Azịza ya adịghị mkpa, kama ọ bụ ezigbo akara maka email, karịsịa ma ọ bụrụ na onye ahụ na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Nke a bụ nzaghachi ihe atụ: Ama m na ị ji ọrụ n'aka nke ukwuu, mana echeghị m na ịchọrọ iziga m email a. Achọrọ m ime ka ị mara ka i wee zigara ya onye ziri ezi. "
Nyochaa ozi ọ bụla
Njehie gị agaghị achọpụta ndị na-anata email gị. Na, dabere na onye nnata, a ga-anwa gị ikpe maka ime ya.
Adịla adabere na ndị nlele. Gụọ ma gụghachi akwụkwọ ozi gị ọtụtụ ugboro, ọkacha mma nke ọma, tupu izipu ya.
Tinye adreesị ozi-e ikpeazụ
Zere iziga ozi-e na mberede tupu i mechaa ede ma dezie ozi. Ọbụna mgbe ị na-aza ozi, ọ dị mma ka ihichapụ adreesị onye nnata ma tinye ya naanị mgbe ị maara na ozi dị njikere ka a zipu ya.
GỤỌ Download oge nchekwa akaụntụ akaụntụ ndebiri
Chọpụta na ị họrọla onye nnata ziri ezi
Ị ghaghị ịkpachara anya mgbe ịdere aha site n'akwụkwọ adreesị gị na akara "I" nke ozi-e. Ọ dị mfe ịhọrọ aha na-ezighị ezi, nke nwere ike ịme gị ihere na onye natara mail site na ndudue.
Jiri edemede ochie
Maka akwụkwọ ozi ọkachamara, na-edekwa fon, agba na ọkọlọtọ nha.
Ọchịchị Katinal: Ozi ịntanetị gị kwesịrị ịdị mfe maka ndị ọzọ ịgụ.
N'ikpeazụ, ọ kachasị mma iji ihe ntinye 10 ma ọ bụ 12 ntụpọ na ederede dị mfe, dị ka Arial, Calibri, ma ọ bụ Times New Roman. N'ihe banyere agba, nwa bụ nhọrọ kachasị nchebe.
Lelee ụda olu gị
Dị nnọọ ka njakịrị na-efu na nsụgharị, ozi gị nwere ike ịkọwa ngwa ngwa. Cheta na onye na-agba ajụjụ ọnụ gị enweghị ihe ọhụụ na ọdịdị ihu ha ga-esi na mkparịta ụka n'otu n'otu.
Iji zere nghọtahie ọ bụla, a na-atụ aro ka ị gụọ ozi gị n'emepụta tupu ịpị Zipụ. Ọ bụrụ na o siri ike maka gị, ọ ga-esiri onye na-agụ ihe ike.
Maka nsonaazụ kachasị mma, zere iji okwu ọjọọ niile ("ọdịda", "ọjọọ" ma ọ bụ "echefu") na mgbe niile "biko" na "ekele gị".
Ncheta nke usoro cybercourtoisie Machị 7th, 2020Tranquillus
gara agaIhe ndepụta nke ederede ederede dị irè
-esonụJiri email ụlọ ọrụ
Ozi ndị ọkachamara: Ụfọdụ iwu maka ụdị ịkpọ oku nkịtị
Mee ka nkà izi ede gị dịkwuo mma
Akuko: 4 Isi ihe di oke mkpa iji mara nke oma